Elu na-agba ese foto na-ọma mara ha ịtụnanya atụmatụ nke aka weghara ngwa ngwa ngagharị oge na-ezu okè. Ọtụtụ ndị na-mgbagwoju anya dị ka nke ese foto bụ ndị kasị mma nke ngwa ngwa ngagharị kpọọ. A bụ ndepụta nke top 10 ese foto nke na-ahụta ka ihe kasị mma maka akada kwesịrị ncheta oge nke ndụ gị na ngwa ngwa ngagharị mode.
The egbe ala Powershot S100 ọrụ a oghere dịgasị iche iche 24-120mm Ẹkot 5x mbugharị ikike. Ọ na-atụmatụ ndị ahụ Canon EOS ọhụrụ DIGIC 5 image processer. The S100 mbiet egosi bụ a 12.1 MP 'elu uche' CMOS ke 1 / 1.7 "Ọdịdị, nke a na-enye ohere ka ịdekọ zuru ezu HD fim na 1920x1080 àgwà, na a 24P pụta framerate.
Advantage: Ukwuu àgwà na obere bit mma nwayọọ larịị nke uche.
Mwepu: Ọ bụ dịtụ ọnụ.
Nke a bụ a "njem mbugharị" digicam na a aba na kọntaktị ma GPS, ma na-enye otu ngwa ngwa-ngagharị ụzọ na obere bit belata image obere ego.
Uru: Affordable na-erughị oké ọnụ karịa ndị ọzọ ji nwayọọ nwayọọ na ije ese foto. Nnọọ pụtara ìhè image na oké nkiri mma.
Mwepu: Low batrị, karịsịa na GPS Logger.
Nke a digicam nwere ike enwetaghị HD (720p) obere vidiyo na 120fps na VGA-larịị (640 x 480) fim na 240fps. Ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ihe atụ na YouTube. Otú ọ dị, nke a bụ dịtụ oké ọnụ igwefoto nke ngwa ngwa ngagharị kpọọ (£ 429) na abụghị fechaa igwefoto.
Advantage: Akwa batrị.
Mwepu: Plastic dum.
Nke a adịghị 320 x 240 p na 220fps na iji ije jpg Ọdịdị, nke site na ibu faịlụ karịa mgbe AVCHD / H.264 nkiri ụdị.
Advantage: Mfe iji ma na-eche ọma wuru
Mwepu: Ịhọrọ Full HD nkiri n'usoro ichikota nhọrọ nwere ike mgbagwoju anya.
Na a elu-nchapụta ngosi, ihe OLED na nchọta onyonyo ma ngwa ngwa mmeghachi omume ụfọdụ, Panasonic Lumix G6 bụ n'elu ihe nile a na-atọkwu ụtọ digicam iji karịa G5. Na ndị ọzọ na usoro, ya agbanwebeghị ukwuu. Ọ bụ ka a ụdị "Obere-SLR" na ejisie ọma na nke na-emekarị ka a pụtara ìhè ọrụ, ọbụna ma ọ bụrụ batrị pụrụ ịdị mma. Ọ bụ ọnụ ahịa na-ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ama aka onye nke ya na-adịbeghị anya forerunners.
Advantage: Ezigbo responsiveness
Mwepu:-emebi batrị ndụ
Olympus mkpịsị SH-1 Superzoom
The Olympus mkpịsị pen SH-1 na-enye a otutu mbugharị ikike na a digicam na dabara mfe nọ gị n'aka. Na a 16-megapixel egosi na 24X visual mbugharị ike, i nwere ike n'ụlọ na a n'ime obodo isiokwu na enwetaghị nkọ, elu-edu oyiyi si n'ebe dị anya.
The SH-1 nwekwara ọrụ merela agadi 5-axis visual image kwụsie ike, n'ihi ya, ị nwere ike dịkwuo ka igwefoto dijitalụ zuru ezu 24X visual mbugharị ikike dịgasị iche iche na ka esi nkọ, ikwanye-free oyiyi. Na-aghọ ọbụna ihe bara uru mgbe ị chọrọ enwetaghị ngwa ngwa, na-eji dijitalụ igwefoto si àmụmà-ngwa ngwa 11.5 na-akwado kwa abụọ enwetaghị a isiokwu na ije.
Advantage: touchscreen ngosi technology na nwere nnọọ nwayọọ dum.
Mwepu: ihuenyo àgwà bụ ala na e nweghị akwụkwọ ntuziaka n'ilekwasị anya nhọrọ.
The Casio Exilim ZR200 bụ a superzoom fechaa igwefoto na nke ahụ bụ fun na-emekarị na-atọ ụtọ na-eji. Ọ bụ ngwa malite na-achọ oyiyi na pụtara ìhè n'ozuzu eme. Foto dị àgwà bụ ihe ezi uche kwa, ma anyị nwere ike na-eche na nke a na igwefoto dijitalụ kọrọ ụfọdụ kọntaktị nke creativity-enyere ya aka-eguzo si ọganihu nke ọzọ ụdị na ahịa.
Advantage: Ezi ewu, pụtara ìhè batrị ndụ
Mwepu: Limited aperture ntọala
The Nikon 1 J4 ga-enwe nsogbu na-achọta ndị hụrụ, ekele ya ala-nke-ojiji, touchscreen, oké responsiveness, fechaa na mfe imewe.
Advantage: touchscreen ngosi ihuenyo na wuru na-Wi-Fi
Mwepu: Ịtụnanya foto àgwà ọbụna na ala ìhè ọnọdụ
Nikon Coolpix S9700 30x Superzoom kọmpat
Nikon Coolpix S9700 anya na nwere ihe niile ọ na-achọ ka mpi 2014 si n'elu superzoom compacts, na a 30x kọntaktị, Wi-Fi, GPS na onye ọrụ-enyi na enyi onye ọrụ interface.
Advantage: zuru okè e mere onye ọrụ-enyi na enyi menus
Mwepu: Ọ dịghị kemfe ọrụ iji nyere aka ka mma ojiji nke 30x mbugharị ikike oghere
Obere ezu dabara n'ụzọ zuru okè na a n'akpa uwe ma ike zuru ezu na-akwali ndị kasị ịma aka foto, ọ n'ezie guzo na ala-ìhè na ngwa-ngwa-edinam oge. Ya na àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa f / 1.8 oghere na-achọkwa na a nnukwu CMOS image egosi maka akpali ala-ìhè ikike, elu ngwa ngwa akada udu nke ọsọ ruo 10 na-akwado kwa abụọ na magnificently blurry ndabere Ebeonodu. Weghara enweghị a ngosi na ụlọ, na mgbede ihe, n'agbamakwụkwọ-ọbụna mgbe ọkụ bụ inyoghi inyoghi-mgbe ahụ itu n'anya onwe gị dị ka gị ihe oyiyi ozugbo-egosi na gị kwesịrị ekwesị smart ekwentị ma ọ bụ mbadamba n'ihe gbasara-atụle. Chọpụta mma nke ala-ìhè dijitalụ foto.
Advantage: Ezi image ruo 800 ISO
Mwepu: Little dịgasị iche iche flash
> Resource> Igwefoto> Top 10 ese foto nke ngwa ngwa Motion